Sida loo sameeyo collage sawiro leh | Hal-abuurka Online
Mid ka mid ah naqshadaha ugu hal-abuurka iyo madadaalada leh marka aad haysato sawiro badan ayaa ah inaad la abuurto iskuxir. Waa hab lagu habeeyo sawirada si ay isu dulmaan ama isku xidhmaan si ay natiijo fiican u helaan. Laakiin, Sida loo sameeyo collage sawiro leh?
Haddii aadan weligaa mid hore u qaban oo hadda aad jeclaan lahayd, haddii aadan taas ku fiicnayn, ama haddii aad si fudud ugu baahan tahay inaad u qabato shaqo, markaa waxaanu ku siin doonaa xal si aad u hesho oo aad u qabato sida ugu xirfadaysan ee suurtogalka ah. Aan samayno?
1 Waa maxay iskudhaf
2 Sida loo sameeyo collage leh sawiro haddii aadan fikrad naqshadeyn lahayn
3 Sida loo abuuro sawirada sawirada laftaadu
4 Ku samee sawirada sawirada Google Photos
Waa maxay iskudhaf
Collage waxaa lagu qeexi karaa sida a sawiro ka kooban wax la taaban karo. Tusaale ahaan, waxaad ka fikiri kartaa inaad doorato dhowr sawir oo carruurtaada ah oo aad u dhigto sidii inay yihiin horumar kuwan. Taasi waxay noqon doontaa isku-dhafka, sababtoo ah ma diiradda saarno hal sawir oo keliya, laakiin waxaa jira dhowr waqti isku mid ah waxayna ka dhigaysaa naqshadeynta mid aad u xiiso badan, inkastoo ay sidoo kale aad u adag tahay in la gaaro.
Mashruucyada noocaan ah waxaa lagu fuliyaa labadaba shakhsi ahaan iyo heer xirfadeed, iyo naqshadeeye garaaf ama hal abuur leh, waa inaad taqaanaa sida loola macaamilo shaqadaada maadaama laga yaabo inay u baahan yihiin shirkado, tusaale ahaan shabakadaha bulshada ama bogga "ku saabsan annaga", oo ka hadlaya shirkadda iyo horumarkeeda, ama ku saabsan shaqaalaha laftooda.
Sida loo sameeyo collage leh sawiro haddii aadan fikrad naqshadeyn lahayn
Waxaa laga yaabaa inay dhacdo in aad u baahan tahay inaad sameyso isku-xir wanaagsan sababtoo ah waxaad jeclaan lahayd inaad haysato sawir qosol leh, sababtoo ah waxaad rabtaa inaad qof siiso hadiyad, ama sababo kale. Si kastaba ha ahaatee, ma haysatid wax badan oo fikrad naqshadeed ah, ama aadan aqoon sida loo maareeyo barnaamijyada. Haddii taasi dhacdo, waa inaadan ka quusan fikradda, sababtoo ah Intarneetka waxaad ka heli kartaa bogag badan oo kaa caawinaya inaad samaysato kolajyada adigoon waxba garanayn.
Dhab ahaantii, waxa kaliya ee aad u baahan doonto waa sawirada aad rabto inaad dhigto oo aad ka fikirto naqshadda aad jeclaan lahayd. Kadibna waa inaad doorataa template si aad u isticmaasho (taas oo ku xirnaan doonta qaybinta sawirada) oo u ogolow barnaamijku inuu sameeyo sixir si uu u soo dejiyo natiijada.
Qaar ka mid ah boggaga aad isticmaali karto si loo sameeyo collage oo leh sawiro waa:
Photojet Waxa kaliya oo aad u baahan doontaa in aad doorato qaab-dhismeedka oo aad soo geliso sawirada si aad ugu habayso sida aad jeceshahay. Marka ay dhamaato waxaad soo dejisanaysaa muuqaal ahaan waana taas.
Fotor. Xaaladdan oo kale waxaad yeelan doontaa afar tallaabo, sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad wax ka beddesho asalka, margin, saamaynta, ku dar stickers iyo xitaa qoraallada.
PicMonkey Ikhtiyaar kale oo aan ku siino, oo aad waxtar u leh sababtoo ah waxaad u beddeli kartaa sidii kii hore. Dabcan, waxay leedahay tijaabo bilaash ah, markaa ka dib waa inaad bixisaa.
Pixiz Waa mid ka mid ah kuwa aan aadka u jecelnahay sababtoo ah waxaad sawiri kartaa qaabab ku salaysan tirada sawirada aad rabto. Markaad geliso tirada sawirada mashiinka raadinta, waxaad heleysaa jaangooyooyin loogu talagalay sawiradaas gaarka ah kuwaas oo kuu badbaadinaya waqti. Intaa waxa dheer, waxaad haysataa dhawr doorasho, in kasta oo aad tiro kooban tahay.
Sida loo abuuro sawirada sawirada laftaadu
Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin, marka laga reebo fursadaha uu internetka ku siinayo barnaamijyada iyo codsiyada, labadaba bilaash iyo lacag, PC, laptop iyo smartphone, waxaad sidoo kale leedahay suurtogalnimada in aad sameysid naqshado adiga kuu gaar ah, adiga oo aan cidna ku xirneyn iyo abuurista wax eber ah. Ma adka sida ay u dhawaaqi karto waxaadna u baahan doontaa oo kaliya barnaamijka tafatirka sawirka sida Photoshop, GIMP ama la mid ah (online ama lagu rakibay kombiyuutarkaaga).
ka talaabooyinka aad qaadi doonto waa sida soo socota:
Gacanta ku hay dhammaan sawirada aad rabto inaad geliso collage-ka. Ka hor inta aan la furin barnaamijka, waxaan kugula talineynaa inaad furto sawir maran, taas oo noqon doonta natiijada isku-dhafkaaga.
Waxa xiga waa in la furo sawirada. Waxaad mid mid u furi kartaa oo koobi kartaa iyaga oo abuuraya lakabyo kala duwan sawirka bannaan (si aad u awooddo inaad si gaar ah u dhaqaajiso mid kasta oo iyaga ka mid ah), ama fur dhamaantood, gudbi ka dibna xidh faylasha sawirada.
Hadda waa markii aad daaha ka qaadi lahayd mala-awaalkaaga. Taas oo ah in la yidhaahdo; waa in aad dhaqaajiso sawirada, oo midba midka kale ku kor sarraysiiso (bedelida habka lakabyada), una dhaaf sidaad rabto.
Dheeraad ahaan, waxaad ku dari kartaa qoraal, sawirro kale (sida stickers ama emojis, iwm.) ama waxaad geli kartaa jir.
Ugu dambeyntii waa inaad kaliya badbaadisaa abuurkaaga oo / ama daabac.
Inkasta oo tillaabooyinka ay u muuqdaan kuwo aad u fudud, oo laga yaabo inaad u malaynayso in hadhow aysan isku mid ahayn, waxaan horey kuugu digaynay haa, way fududahay. Waa run taas Marka ugu horraysa waxa lagayaba in ay qaadato wakhti dheer,laakin hadii aad samirto waxa ay ku danbeynaysaa in uu soo baxo ,waxana ugu wanagsan waxa ay noqonaysaa wax aad adigu iska abuurtay wax aan jirin.
Ku samee sawirada sawirada Google Photos
Haddii aadan rabin inaad ku shaqeyso barnaamij, ama aadan rabin inaad ku rakibto wax codsi ah, ama xitaa booqo boggaga internetka si aad u martigeliso sawirada sababtoo ah ma garanaysid waxa ay ku samayn karaan hadhow (waa mid ka mid ah faa'iido darrooyinka isticmaalka kuwan). mareegaha), ka dib, ikhtiyaarka aad weydiin kartaa waa Google Photos.
Haddii ay dhacdo inaadan aqoon, App-kan waxa hore loogu sii rakibay dhammaan mobaylada Android-ka, markaa run ahaantii uma baahnid inaad ku rakibto wax aan hore ugu jirin mobilkaaga.
Runtii waa App-ka ku qarsoon Mobile-kaga sababtoo ah indhaha qaawan kuma arki doontid. Laakiin waa halkaas. Waxay la soo bixi doontaa sumadda biinwheel, mid kasta oo ka mid ah daabyada midabka (casaan, jaalle, cagaar iyo buluug, midabada Google).
Kaliya waa inaad riixdaa oo aad geli doontaa app-ka. Sii dhawr daqiiqadood oo aad ku shubto dhammaan sawirada aad hayso oo marka aad aragto in ay dhammaatay, dooro ilaa 9 sawir oo kala duwan oo ka mid ah duubka sawiradaada.
Marka xigta, waa inaad ku garaacdaa + calaamadda sare ee abka. Waxay soo bandhigi doontaa menu halkaasoo "Collage" ay ka soo muuqato. Isla marka aad siiso, sawiradan si toos ah ayaa loogu dhejin doonaa fareem cad.
Dabcan, waxaad ku dari kartaa qaar ka mid ah qoraallada, filtarrada ... laakiin mar hore ayaan kaaga digaynay in aysan kuu ogolaan doonin inaad bedesho nidaamka sawirada (Haddii aad taas rabto, waa inaad dib u dejisaa naftaada oo aad u tilmaantaa sawirrada sida saxda ah ee aad rabto inay u muuqdaan).
Sida aad arki karto, waxaad haysataa fursado badan oo aad ku samayn karto collage sawiro leh. Ma ku talinaysaa mid kale?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida loo sameeyo collage sawiro leh
Sida loo naqshadeeyo buug-yaraha xayeysiinta